Umaki: Umculo | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 24, 2018 NgoMsombuluko, Februwari 26, 2018 Douglas Karr
Isikhulu esiphezulu sePrime Car Wash uBrent Oakley ube nenkinga. Ukuwasha kwakhe imoto eyi-premium bekuyinto eshisiwe, kepha ngenkathi amakhasimende akhe elinde emotweni enkudlwana, akekho noyedwa obabandakanyeka emikhiqizweni nasezinsizakalweni ezintsha obekufanele bazinikeze. Wakha ipulatifomu lapho angaqopha khona okwakhe, imilayezo esuselwa endaweni nomculo kumakhasimende akhe. Futhi kwasebenza. Ngenkathi eqala ukukhuthaza ukufaka esikhundleni se-washer nge-radio yasesitolo, wathengisa ama-wiper amaningi
NgoLwesine, ngo-Okthoba 22, 2015 Douglas Karr
Ukuqanjwa okusha kuza ngezindleko ezithile. I-Uber inomthelela omubi embonini yamatekisi. Umsakazo we-Intanethi unomthelela ekusakazeni umsakazo nomculo kwimidiya yendabuko. Ividiyo efunwayo inomthelela kuma-movie wendabuko. Kepha lokhu esikubonayo akuyona ukudluliswa kwesidingo, isidingo esisha. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi okwenzekayo akuyona imboni eyodwa ebulala enye, kungukuthi izimboni zendabuko zaziphephile emikhakheni yazo yenzuzo futhi zazibulala kancane kancane. Kuyikholi kunoma iyiphi indabuko
ULwesibili, April 29, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kule mpelasonto edlule, sikhahlele umcimbi wokuqala weMusic, Marketing & Tech Midwest Event (#MTMW) - umcimbi lapha e-Indianapolis wokuqoqa imali yeLeukemia neLymphoma Society ukukhumbula uBaba wami esilahlekelwe ngonyaka odlule. Lo umcimbi wokuqala engake ngawubeka ngakho-ke wawusabeka impela. Kodwa-ke, ihambe ngaphandle kokuphazamiseka futhi ngifuna ukunikeza ukuqonda kwabanye ukuthi kungani bekuyikho
NgoLwesibili, Novemba 20, 2012 Douglas Karr
Asikhulumi kakhulu ngomkhakha womculo lapha kubhulogi lobuchwepheshe bokumaketha kepha, mhlawumbe, esinye sezibonelo ezinhle kakhulu zokushintsha indlela yokuziphatha kwamakhasimende. Sisukile kwimidiya yomculo saya kumadivayisi omculo… futhi manje sisuka kumadivayisi siye ekusakazeni. Ngilahle i-iTunes ngokuphelele futhi manje ngisebenzisa iSpotify ngayo yonke into. Ukutholwa kwenzeka ngokusebenzisa amanethiwekhi wami wokuxhumana nomphakathi nangomsakazo weSpotify ohlanganisa ukuthanda umculo njengokungipha izingoma ezintsha.